Ny fitsipiky ny lalao amin'ny sambo
Reny Ankizy ary mikarakara azy
Derta - kilalao malaza izay ahitana mpilalao baolina kitra amin'ny baolina manokana. Ho an'ny olona iray, fialamboly sy fialam-boly tena mahaliana, saingy misy olona milalao eo amin'ny sehatra matihanina. Mahaliana ity fanatanjahantena ity satria azo atao amin'ny vanim-potoana rehetra, na dia amin'ny ankizy aza, na amin'ny fomba lavitra aza. Ho an'ny fampiofanana dia tsy mila sehatra maro, ankoatra izay, ny vidin'ny vola alaina hanombohana izany dia kely ihany. Misaotra an'io demaokrasia io, mihamalaza ny lalao, satria mahaliana ny fandinihana ny fitsipiky ny lalao baolina. Tokony hotadidin'ny ray aman-dreny fa ny lalao dia mampivelatra ny fahamendrehan'ny ankizy sy ny fahamarinany.
Tanjona sy dihy
Voalohany aloha dia mila fantarinao ny karazana fitaovana ilaina ho an'ity fanatanjahantena ity. Mba hamokarana taratra, ampiasao ny fibra voajanahary, izay azo avy amin'ny ravin'ny agave. Ity lahatsoratra ity dia atao hoe sisal. Izy io dia avy amin'ny vovo-koditra natorony izay vita ny tanjona, 451 mm (+/- 10 mm) ny hamaron'izy ireo.
Eo amin'ny lafiny anoloana dia misy sehatra amin'ny loko samihafa, ny tady dia mifatotra avy any ambony, manasaraka ny lasibatra amin'ny sehatra radial (20 sombintsombiny), ary koa mitombo avo roa heny sy roapolo. Eo afovoany dia sehatra maitso "Bull" ary ilay mena - "Bull-Ai". Araka ny fitsipiky ny lalao amin'ny sambo, manamarika ary mamaritra ny isan'ireo teboka noraisin'ilay mpilalao.
Ary koa ho an'ny lalao dia mila sidina, izay mety ho varahina na tungsten. Ny lanjany dia tsy tokony mihoatra ny 50 g (amin'ny ankapobeny 20-24 g), ary ny lavany hatramin'ny 30.5 cm. Ny dity tsirairay dia ahitana ampahany toy izany:
Ny barika, izany hoe ny ampahany metaly izay ahodina ny fanjaitra;
Shank - ampahany tapaka amin'ny metaly na plastika, mihidy ao anaty barika;
Ny felam-boninkazo dia napetraka ao amin'ny shank, natao mba hampiorenana ny sidina.
Tsara kokoa ny mividy fitaovana tsara, na dia mandany fotoana bebe kokoa aza. Izany dia hiaro amin'ny fisaritahan-tsolika misavoana.
Ahoana ny fandinihana solomaso mifanaraka amin'ny fitsipiky ny darts?
Afaka miara-milalao ianao na ekipa mpandray anjara 2 na mihoatra. Amin'ny fisiahana, dia tapa-kevitra hoe iza no hanomboka aloha. Araka ny fitsipiky ny darts, tokony ho 1,73 m ny halavirana mankany afovoan'ny tanjona avy amin'ny tany, ary avy amin'ny tsipika izay nanaovana ny tifitra, 2.37 m.
Ny ekipa tsirairay dia tsy maintsy manipy baomba roa, ary avy eo dia esorina avy amin'ny lasibatra. Ny tifitra dia tsy azo isaina raha niditra tao amin'ny tsipika ilay tompon-trosa, ary koa ny trangan'ny dart ao anaty dart iray hafa na latsaka avy amin'ny lasibatra.
Toy izao manaraka izao ny fanamarihana:
ny fidirana ao amin'ny sehatra sehatra dia isaina araka ny isa voalaza ao amin'ilay sehatra;
Ny famolahana ny peratra ivelany dia mitombo avo roa heny amin'ny isa;
hitifitra ao amin'ny peratra anatiny ny tarehin'ny sehatra;
ny sehatra maitso dia manome tsipika 25, mena - 50.
Ireo no fitsipika mahazatra amin'ny darts, saingy misy safidy samihafa, izay mila tenenina ihany koa.
Ny lalao malaza indrindra dia "501", ary manomana fifaninanana ofisialy ihany koa. Ny mpilalao na ny ekipa tsirairay avy amin'ny ambaratonga voalohany dia nomena loka 501 ary mila "soratana" miaraka amin'ny countdown mandritra ny fifaninanana izy ireo. Ilaina ny manakatona ny solomaso farany amin'ny alalan'ny sehatra avo roa heny. Raha toa ka hita fa tamin'ny làlana farany no nahitan'ny mpilalao maromaro kokoa noho izay tao amin'ny baliny, dia hijanona amin'ny vokatra izy, izay teo alohan'ny fisarihana.
Ny lalao malaza iray dia "Cricket", ny maha-fototra azy io dia ny manakombona tarehimarika maromaro amin'ny tanjona. Noho izany, ao amin'ny lalao dia manapaha sekta 15 ka hatramin'ny 20 ary "Bull". Ao amin'ny "Cricket" mba hanakatona ilay sehatra izay ilainao hanangona azy dia misy isa maromaro.
Mazava ho azy fa ny fitsipi-dohan'ny filalaovana ho an'ny ankizy dia afaka manatsotra na hafa. Ilaintsika ihany koa ny mahatakatra fa ny zaza no tokony hikolokolo ny lanjany, eo amin'ny ambaratongan'ny fitomboany. Ny doka dia mety ho fialam-boly tena tsara sy fomba iray handany fotoana fialan-tsasatra.
Tranom-bolo ho an'ny zatovo
Fampivoarana ny fitomboan'ny zaza
Fitaovana avy amin'ny voa katsaka
Ahoana ny fomba hampianarana ankizy iray hatory ao anaty vatany?
Fomba hisafidianana bisikileta ho an'ny ankizy - tsipiriany manan-danja
Ahoana no fomba handoavam-bola ny governora amin'ny fahaterahana zaza?
Ny asa tanana momba ny lohahevitra "Fiarovana ny afo" - 55 sary
Anaram-batana amin'ny taranja jadona
Rahoviana ny ankizy hanome dite?
Andraikitry ny zaza ao an-trano
Ny andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana zanaka
Andron'ny fahasalamana ao amin'ny kindergarten
Kilalao ho an'ny ankizy 6 volana
Fomba fitsaboana fotsifotsy momba ny paoziny
Zavamaniry misy vatosoa
Zava-tsarobidin'ny vehivavy Zyvanshi
Inona no hitranga any Yaroslavl amin'ny iray andro?
Ny parrot-tavy dia marary - soritr'aretina
Proctitis - soritr'aretina
Tsy misy solosaina: Olona 30 no tratra nitifitra ireo tena tia tena!
Ahoana no fomba anaovana hamburger any an-trano?
Ahoana ny fametrahana ny gorodona eo amin'ny rindrina?
Beach Fashion ho an'ny vehivavy feno 2015
Gel amin'ny ratra nify
Tetezana plastika miaraka amin'ny varavarana
Ahoana ny famafazana ovy?
Andriamanitry ny rano
Mizana - vato masika
Sakafo miaraka amin'ny salmon
Miakanjo toy ny jazz
Ny fampifangaroana loko ao anaty trano fandraisam-bahiny
Ny Princess Maria-Olympia sy Prince Paul nankalaza ny tsingerintaona nahaterahana tao amin'ny orinasa vahiny
Lanonana amin'ny tanany manokana